Suu 67 စုစည်းမှု | MoeMaKa Burmese News & Media
Suu 67 စုစည်းမှု
သမီးအောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဘခင်ဦးအောင်ဆန်း နှစ် ၁၀၀ပြည့် သို့ အခမ်းအနားများအတွက် သ၀ဏ်လွှာ (ကိုမျိူး ဂရပ်ဖစ် ဖေ့ဘွတ်) ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၅ အောင်ဆန်းစိတ်ဓာတ် မှာ – ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊...
သီဟမောင်မောင် ဒီဇိုင်း – Suu 67 Birthday Postcard ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related...
ရေးသူ- နိုရီကို အိုဟတ်စု (Noriko Ohtsu) ဘာသာပြန်ဆိုသူ – ဒေါက်တာ သီဟမောင် (ကမ္ဘောဇ) (ထိုင်း – မြန်မာနယ်စပ်) သရုပ်ဖော်ပန်းချီ – ခင်မောင်ရင် ၁၉၉၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ မေ ၂၂၊ အင်းစိန် ပါတီရုံးခွဲဖွင့်ပွဲ မိန့်ခွန်း ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၂ ကျွန်မတို့ အင်းစိန်မြို့နယ် ရုံးဖွင့်ပွဲကို လာရောက်အားပေးတဲ့ သူတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ဒီလိုအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရုံးကို...
Graphics Ko Myoe – Suu 67 Postcard/ Poster ဇွန် ၈၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No...
AMS ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၇ နှစ် မွေးနေ့ဂုဏ်ပြု ပိုစတာ ဇွန် ၈၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related...
မိုးမခ၊ ဇွန် ၆၊ ၂၀၁၂ မိုးမခ၏ ပင်တိုင်၊ သုတေသန စာရေးဆရာသန်းဝင်းလှိုင် စုစည်းရေးသားသည့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးအတွေးအမြင်များ စာအုပ်ကို လာမည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၇ မွေးနေ့အမီ မိုးမခက ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်သည်။ ဆရာသန်းဝင်းလှိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မြန်မာပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးဖြတ်သန်းမှုများနှင့် အထင်ကရမိန့်ခွန်းများကို စုစည်း...